Ciidamo Itoobiyaan ah iyo Macawiisley oo dagaalamay; khasaaro jira - Worldnews.com
Illaa iyo haatan ma cadda sababta keentay isku dhaca labada dhinac oo lasoo wariyey fiidnimadii xalay oo Arbaco
"Ciidamaddaas oo ka careysanaa taliyihii hogaaminayey waxay doonayeen in ay u talaabaan xadka Dowlad degaanka Soomaalida,"
Wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu dhexmaray ciidamo Itoobiyaan ah iyo maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaano Macawisley, waxa uuna...
Dad ku dhintay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho [Magacyada]
MUQDISHO, Soomaaliya – Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax ka dhacay duleedka Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, maanta oo Isniin ah. Qaraxa oo noociisa ay...
Dagaalameyaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu laayey Shabeellaha Hoose
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadey in 13 kamid ahaa xoogaga Al-Shabaab ay ku dishay howlgal laga sameeyay gobolka Shabeellaha...
Somalia Maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya gacanta kusoo dhigeen caruur kooxda Al Shabaab si qasab ah ku...
DAAWO Beesha Habargidir oo diyaarado Gurmad sida u direysa Hiiraan
Dowlada Soomaaliya Oo Gaadiid Dagaal Ku Warejisay Maamulka Gobolka Hiiraan
Kulan Looga Hadlayay Sidii Xal Loogu Heli Lahaa Fatahaada Wabiga Hiiraan Oo Muqdisho lagu Qabtay
Doon ay La Socdeen Masuuliyiinta Gobolka Hiiraan oo Ku Qalibantay Fatahaada Wabiga
Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan
Degmada Moqokori Ee Gobolka Hiiraan iyo Nolosha Dadka ku Nool Degmadaasi
II WAD SHEEKADA SHEEKO GAABAN OO QOSOL BADAN Cali Hiiraan, Ilka Case & Anisa Yarey
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay xaaladda fatahaadda.
Ciidamo DF u daabushay gobolka Gedo oo "ku biiray" Jubbaland
KISMAAYO, Jubaland – Maamul goboleedka Jubaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqey in ay kusoo biireen qaar kamid ah ciidamada Dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo. Afhayeenka laamaha ammaanka Jubaland, Cabdinuur Maxamed, ayaa qiray in ay jiraan cutubyo wali gacantooda ka maqan. Askarta dhankooda u soo wareegtay oo ah booliska sidda gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayuu...
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhaawacmeen kadib markii qarax maanta oo Khamiis ah ka dhacay Dhuusamareeb, magaala madaxda Galmudug. Warar is-khilaafsan ayaa waxay kasoo baxayaan nooca qaraxa oo lagu kala sheegay Miino iyo Bam-gacmeed. Taliska Booliska magaaladda oo sheegay in ay baaris ku waddaan ayaa sheegay in...
CADAN, Yemen – Golaha ku meel gaarka koonfurta dalka Yemen ee u ololeeya gooni u goosadka ayaa soo saarey fariin ku socota dadka ku nool halkaas oo ay kamid yihiin Soomaalida. Digniinta ayaa si gaar ah loogu carababaabay Soomaalida, taasoo ku kordhisay walwal aad u badan. Fariinta ayaa sheegeysa in looga baahan yahay in aysan ku milmin siyaasadaha is-diidan iyo dhinacyadda ku...
Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Jubada Hoose
KISMAAYO, Jubaland – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax Miino oo maanta ka dhacay gobolka Jubada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Qaraxa ayaa si gaar ah looga soo wariyey degaanka Haawina oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley. Dadka degaanka ayaa u sheegay warsidaha Garowe Online in miinada ay la kacday gaari nooca raaxada ah oo ay shacab la...
Cunug dhalan 30-saacadood oo laga helay cudurka Coronavirus
BEIJING, China – Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa Khamiista maanta ah warisay in cunug dhalan 30-saacadood laga helay cudurka Coronavirus. Tani ayaa waxay ka dhigan tahay in uu noqonayo kiiskii ugu da'da yaraa ee la diiwaan-geliyo, inta illaa iyo haatan la og-yahay. Cunuga ayaa 2-dii bishaan Febraayo, 2020, ku dhashay Wuhan, oo ah halka uu kasoo bilowday caabuqaan dilaaga ah....
KISMAAYO, Soomaaliya - Dagaal u dhaxeeya laba malleeshiya beeleed, ayaa ka socda degaanno dhaca duleedka Kismaayo, xarunta gobolka Jubada Hoose, kaasoo geystay khasaaro isagu jira dhimasho iyo dhaawac. Illo-wareedyo ku sugan gobolka ayaa warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in dagaalka oo u dhaxeeya beelaha Cowrmale iyo Harti uu ka qarxay tuulooyin ku dhaw degmada Badhaadhe iyo...
Saacado Badan kadib Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Ka hadlay Doontii Rogmatay
Saacado Badan kadib Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Ka hadlay Doontii Rogmatay...
Taliska Ciidamada Dowlada soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay dhawaan ugu deeqday dowlada dhexe ee soomaaliya ....
www.universalsomalitv.net www.facebook.com/universalsomalitv www.twitter.com/tvuniversal www.instegram.com/tvuniversal...
Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan...
Degmada moqokori oo kamid ah Degmooyinka Gobolka Hiiraan ayaa waxa dhawaan gaaray wariyaal ka tirsan Idaacada Hiranweyn waxan idiin soo gubineynaa muuqaalka nolosha moqokori iyo waxyaabaha ay noloshoda ku tiirsan tahay dadka ku nool Degmadaasi....
Wararkii ugu dambeeyay & Riwaayado qosol badan kala soco www.saafifilms.com We are the largest Somali Productions Company....
Taliska Ciidamada Dowlada soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay dhawaan ugu deeqday dowlada dhexe ee soomaaliya .
Degmada moqokori oo kamid ah Degmooyinka Gobolka Hiiraan ayaa waxa dhawaan gaaray wariyaal ka tirsan Idaacada Hiranweyn waxan idiin soo gubineynaa muuqaalka nolosha moqokori iyo waxyaabaha ay noloshoda ku tiirsan tahay dadka ku nool Degmadaasi.